भाटभटेनीले कालोबजारी गरेपछि १ हजार जरिवाना, १ महिना कैद ! - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
भाटभटेनीले कालोबजारी गरेपछि १ हजार जरिवाना, १ महिना कैद !
भरतपुर : लकडाउनको मौका छोपी कालोबजारी गरेको अभियोगमा भरतपुर ओरालोमा रहेको भाटभटेनी सुपर मार्केटलाई स्थानीय प्रशासनले रु एक हजार जरिवाना र एक महिना कैदको सजाय सुनाएको छ । उपभोक्ताको गुनासोपछि प्रशासनले गरेको अनुगमनका क्रममा भाटभटेनीले प्रचलित मूल्यभन्दा बढीमा सामग्री बेचेको भेटिएको थियो ।
यस्तै महङ्गो मूल्यमा फलफूल बिक्री गर्ने चार व्यवसायीलाई कारवाही गरिएको छ । कारवाहीमा पर्नेमा काठमाडौँ फ्रुड्स र आचार्य फ्रुड्स नारायणगढलाई रु २५÷२५ हजार र हिमालय फ्रुड्स तथा सुभम फ्रुड्सलाई रु १०÷१० हजार धरौटी तोकिएको उहाँले जानकारी दिए ।
बजार अनुगमनका क्रममा उनीहरूले उपभोक्तालाई बजार मूल्यभन्दा महङ्गो मूल्यमा बिक्री गरेको पाइएपछि धरौटी तोकी तारेखमा छाडिएको सिम्खडाले बताउनुभयो । उनीहरूलाई स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ९(५) बमोजिम कारवाही गरिएको उनले जानकारी दिए ।
लकडाउनको मौका छोपी महङ्गोमा सामान बिक्री गर्नेलाई स्थानीय प्रशासनले कडाइका साथ अनुगमन गर्ने काम गरिरहेको छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: शुक्रवार, जेठ ३० २०७७ १८:१०:०३